भारतसँग सल्लाह माग्नेहरु नेपाल फर्किएपछि बिर्सन्छन् : जंगीलाल राय यादव (अन्तर्वार्ता) - Ratopati
भारतसँग सल्लाह माग्नेहरु नेपाल फर्किएपछि बिर्सन्छन् : जंगीलाल राय यादव (अन्तर्वार्ता)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारत भ्रमणमा गएका तमलोपाका महासचिव जंगीलाल राय यादवसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले फोनमा गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भ्रमणमा तपाईँ हुनुहुन्छ, के छ उताको खबर ?
–मलाई खासै महत्वपूर्ण लागेन । समस्या समाधानको ग्रीन सिंगनल कहि कतैबाट देखिएको छैन । जे सोचेर यहाँ आइएको थियो, त्यो हुन सकेन । संविधानलाई रिकग्नाइज गरिएको छैन । मेरो विचारमा मधेशको समस्या जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म सविधानलाई भारतले स्वागत गर्दैन जस्तो लाग्छ ।
मधेशको समस्या समाधान हुन्छ र त्यसको बारेमा त्यहाँ पनि कुराकानी हुने गरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण भएको हो भनिन्छ के के भयो त्यहाँ ?
–भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा मधेश शब्द उच्चारण नगरेपनि सविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका सम्पूर्ण समुदायलाई समेटेर समस्या समाधान गरे मात्र सविधान कार्यान्वयन हुने भन्नु भएको थियो ।
तपाई तीन दिनदेखि दिल्लीमा हुनुहुन्छ, विभिन्न नेता तथा व्यक्तित्वहरुसँग भेटघाट भएको होला, भारत मधेशको समस्याप्रति गम्भिर देखिन्छ ?
–मधेशको समस्या समाधान होस् भनि भारतका सबै नेता तथा आम व्यक्तिहरु गम्भिर देखिएका छन् । कसैले भन्दैनन् कि मधेशको समस्या समाधान नहोस् तर भारत भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्रीहरुले यहाँ मानेका कुराहरु पनि नेपाल फर्केर कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनन् त्यो नै ठूलो समस्या हो । मैले धेरै नेताहरुसँग यस विषयमा कुरा गरे । उहाँहरुको एउटै भनाई छ कि नेपालबाट आउने प्रधानमन्त्री वा नेताहरुले यहाँ कुरा गर्छन्, प्रतिवद्धता गर्छन् तर नेपाल फर्केर सबै विर्सिन्छन्। नेपालबाट आउने नेता तथा प्रधानमन्त्रीहरुले उल्टै सल्लाह नै माग्छन् कि ‘आप लोग सल्लाह दिजिए, क्या करना हैं (तपाईहरु सल्लाह दिनुस् के गर्नुछ) ’ तर नेपाल फर्केपछि केही हुँदैन भने व्यापक गुनासो छ । यहाँ आएर सल्लाह नमाग्दा पनि हुन्छ ती नेताहरु भन्नुहुन्छ, यहाँ आएर उल्टै सल्लाह माग्छन् तर नेपाल फर्केर उल्टा सिधा बोल्छन् र कार्यान्वयन पनि गर्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल फर्केपछि मधेशको समस्या समाधान हुन्छ ?
–मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले तीन दिनमा जो वतावरण यहाँ देखे त्यसले त मधेशको समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । पहिले भन्दा परस्थिति झन् विग्रिदै गइरहेको छ । त्यसैले मलाई आशा छैन कि प्रधानमन्त्री फर्केपछि मधेशको समस्या समाधान हुन्छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा आएको बेला र अहिलेको बेलामा धेरै फरक छ । त्यो बेला त कमसे कम मधेशको समस्या समाधान हुने गरि संशोधन प्रस्ताव संसदमा लग्ने कुरा थियो तर अहिले त त्यो पनि छैन । कतैबाट सविधान संशोधनको बारेमा मैले अनौपचारिक, औपचारिक कुरा सुनेको छैन । ठोस रुपले त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन ।
तपाईँ एउटा मधेशी दलको प्रतिनिधित्व गरेर जानु भएको छ, मधेशी मोर्चाको नेता पनि हुनुहुन्छ, मधेशको बारेमा त्यहाँका नेताहरुसँग के के कुरा गर्नुभयो ?
–यहाँ त्यसप्रकारको सेमिनार वा गोष्ठी भएको छैन जहाँ म आफ्नो कुरा राख्न पाउँ । वा त्यस प्रकारको कुनै मञ्च भएको भए वा कार्यक्रम भएको भए म स्वभाविक रुपमा आफ्नो कुरा राख्थे । तर, यसो व्यवहारिक रुपमा साथी भाइसँगको भेटघाटमा त विभिन्न कुराहरु भएको छ त्यसको खासै अर्थ राख्दैन । शरद यादव, नितिशकुमारहरुसँग कुराकानीहरु भयो ।
प्रचण्डको भ्रमण उलब्धिमुलक भयो कि भएन, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
–यो भ्रमण उपलब्धीमुलक भन्दा पनि सद्भावना भ्रमण हो । विगतमा हुने गरेको भ्रमण जस्तै परम्परालाई कायम राख्न यो भ्रमण भएको हो । भ्रमणको कुनै खास एजेण्डा थिएन, जो त्यसमा बहस होस् ।